जलविद्युतको ‘हव’ बन्दै ताराखोला, थपिँदै चार ठूला आयोजना — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > जलविद्युतको ‘हव’ बन्दै ताराखोला, थपिँदै चार ठूला आयोजना
बागलुङ । बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा धमाधम जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । सयपत्री जलविद्युत निर्माण सम्पन्न भएको ताराखोलामा हालै ताराखोला जलविद्युत् आयोजना ३८० किलोवाट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
केन्द्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी मध्यताराखोला जलविद्युत् आयोजना २.२ मेगावाटको निर्माण कार्य चलिरहेको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक अनिल खड्काले बताए ।
स्थानीय पायोजनका लागि निर्माण गरिएको ताराखोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् खपत नभएपछि केन्द्रिय प्रसारण लाइनमा समेत जोड्न थालिएको छ । अहिले मध्यतारा जलविद्युत् आयोजनाको पाइपलाइन निर्माण भइरहेको स्थानीय लगानीकर्ता धनबहादुर विकले जानकारी दिए।
२०७७ कार्तिक २० गते ०९:०३ मा प्रकाशित
टाटाको सस्तो कार ‘नानो’ अब नयाँ स्वरुपमा आउने
मौरीपालक किसानले जान्नैपर्ने, यसरी कृत्रिम तरिकाले रानी मौरी विकास गर्न सकिन्छ !
दुलाहाले दाईजो दिनुपर्ने अनौठो चलन,नन्द र भाउजुबीच बिहे !
लगानीकर्ताहरुले आजै नगद लाभाँश खाने सोच बनाउनुभएको छ ? यो सूचना काम लाग्नसक्छ !